hymns – PCG Hope
Verse 1 Monto dwom pa mma Agyenkwa one Yehowa! Monna n’ase munyi n’aye Wo mmaa nyinaa Ese Kristo gyidifo se woma ne din no so Monna n’ase, munyi n’aye Munhyira no daa! Verse 2 Kristo manfo ne ne mpamfo Ho ka won ho pe Na won yie ne asomdwoe Ye won Wura fe odo ne…
Verse 1 Monkamfo Nyankopon mo anom ne koma mu. Oye ade kese wo yen nnipa nyinaa mu. Efi yen nanom yam de besi nne da yi wahu yen mmobo pii ahwe yen so yie. Verse 2 Yen nkwamafo ne no, ahohia mu gyefo; n’adoe no dooso pii ma won a wosu fre no. Enti b’ribiara…
Verse 1 Kamfo Yehowa, otumfo Nu’yamfo ne Hene! Wo a wagye wo na ese se woda no ase! Mommehyiam! Momfa asanku ne nnwom mmeyi ne din aye yiye! Verse 2 Kamfo Yehowa, ne tumi di ade nyinaa so: ode ne kore ntaban asoa wo wo kwan so; ode nnepa ne anigye hye wo ma; da…
Verse 1 Yesu, wo nkyen na metena daa; Daa na mesom wo nkutoo! Ade biara rempam me, Mefa wo kwan pa no so. Wone me nkwa mu nkwa pa no, Me kra mu anounyam; Senea bobe ma ne baankwa, Se woye ma me nso nen. Verse 2 Hena na oye me yiye Sen wo a…